တနင်္လာနေ့မတ်လ 8, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Matt Chandler
ကျွန်တော့်အထက်တန်းဘောဂဗေဒဆရာ Mr. Dilk ကိုအမြဲမှတ်မိနေမှာပါ သူကကျိန်ဆဲချင်သောသူ၏ Hilary Self-censorship အပြင် (? ကောင်းပြီ ... BUGS!?) သူ၏ထပ်ခါတလဲလဲသုံးသော clichhes ကိုငါ့ဟော်မုန်းထည့်ထားသော ဦး နှောက်ထဲသို့ဉာဏ်ပညာအချို့ကိုမောင်းနှင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူအကြိုက်ဆုံးတွေထဲမှာ
ယခုတွင်၎င်းသည်ကော်ပိုရိတ်ရုံးတိုင်း၌သင်မြင်တွေ့ရသောတောင်တန်းများပေါ်သို့ဝေလငါးအမြီးများနှင့်လူများ၏ဓာတ်ပုံများပါသောကြောက်မက်ဖွယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပိုစတာများကိုမတီထွင်မီကဖြစ်သည်။ ပညာရှိတို့၏အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းသည်သင်၏မိဘများ၊ ဆရာများနှင့် PBS တို့၏နယ်မြေဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအကွံဉာဏျ၏ hackneyed သဘောသဘာဝနေသော်လည်းဤသူသည်ငါနှင့်အတူမှီဝဲ။
ယခုကျွန်ုပ်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းဘဝတွင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကိုသိသိသာသာကျဆင်းစေပြီးကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာအတူတကွချပြီးသောအခါနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းဗျူဟာတစ်ခုတည်းသောအရေးကြီးဆုံးသောတာ ၀ န်မှာသင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်မည်သည့်ပလက်ဖောင်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊
ဝီလီ - လစ်လစ်ချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏စရိုက်ကိုလျော့နည်းစေသည်သာမက၎င်းသည်ငွေကြေးအရအလဟ ful ဖြစ်စေသည်။ ဘယ်မှာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတာကိုတိတိကျကျစာရင်းမသွင်းဘဲနဲ့အဲဒီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလ - သင့်အွန်လိုင်းကြိုးပမ်းမှုတွေဟာအချိန်နဲ့ငွေကုန်ကျတယ်။
ဆားငန်သောမည်သည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်မဆိုသင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင့်အားကူညီပေးလိမ့်မည်။ သူတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုအကြောင်းကြားပါ။ အကယ်၍ သူတို့ကဟက်၊ ဟော်သို့မဟုတ်လုံးလုံးလန်းဆန်းမှုမရှိလျှင်ထွက်ပြေးပါ။ သင်၏အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်ကျုံ့သွားသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဖျက်သိမ်းလိုက်သောစစ်ဆေးမှုများ မှလွဲ၍ ၎င်းအတွက်ပြသရန်ဘာမှမရှိပါ။
ထို့ကြောင့်သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဒီဂျစ်တယ်နေရာ၌တစ်နေရာတည်းသွားနိုင်လျှင် CMO ၏လူမှုအခင်းအကျင်းလမ်းညွှန်ကိုကြည့်ရန်သင့်အားအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ထိပ်တန်းပလက်ဖောင်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုလူမှုမီဒီယာလိမ်လည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် 97th ကြမ်းပြင်နှင့်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောတစ်ရွက်စာရင်းမြစ်လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။
လူမှုရေးကွန်ရက် ၀ န်ဆောင်မှုတွေမြောက်မြားစွာရှိပါတယ် မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမှန်ကန်သောအရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့အားလုံးကိုအသုံးချရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ထိရောက်မှုမရှိသကဲ့သို့ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အဖြေမရှိ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာပါဝင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမရှိပါ။ စဉ်းစားတွေးခေါ်။ အပြုသဘောဆောင်သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတွင်သင်၏အချိန်နှင့်ငွေများကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချသည်။
Social Media Marketing သည် Social အကြောင်းဖြစ်သည်။ မီဒီယာမဟုတ်ပါ
မတ်လ 8, 2010 မှာ 4: 52 pm တွင်
ဆိုရှယ်မီဒီယာကို စတင်ပြီး နေ့တိုင်း အများကြီး သင်ယူပါ။ ရှေ့ကိုတိုးလာရင်း အာရုံစူးစိုက်မှုကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်နေဆဲ။ ဤနေရာတွင် ဆိုဒ်ကောင်း။ နောက်ထပ်ဖတ်ရန်မျှော်လင့်ချက်။
မတ်လ 9, 2010 မှာ 1: 36 pm တွင်
"မင်း အစီအစဉ်မကျရင် မင်း ပျက်မယ်" ဆိုတဲ့ စကားစုကို ရည်ညွှန်းပြီး ငါပြောတာ လုံးဝမှန်တယ်။ စီးပွားရေးဆိုရှယ်မီဒီယာကမ်ပိန်းတိုင်းတွင် အဓိပ္ပါယ်တစ်ခု၊ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနှင့် နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ရှိရမည်။ လူမှုကွန်ရက်များကို အသုံးပြုမှုသည် ထောင်နှင့်ချီသော လုပ်ငန်းငယ်များတွင် အမှတ်တံဆိပ်သိရှိနားလည်မှုကို ဖန်တီးရန်၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို မြှင့်တင်ရန်၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရန်နှင့် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေများသည်။ သင့်အစီအစဉ်ကို ဖန်တီးပြီးသည်နှင့် သော့ချက်ကား အဘယ်နည်း။ ထိုနေရာတွင် ရှိနေရန် သင့်အသိုင်းအဝိုင်းကို တည်ဆောက်ပြီး ၎င်းကို ဂရုစိုက်ပါ။
အောက်ပါအဖြေကို ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ http://bit.ly/aqAGbe Maria Sipka သည် သင့်အသိုင်းအဝိုင်းအွန်လိုင်းတွင်တည်ဆောက်ရန်အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုဖော်ပြထားသည့် Startups.com တွင်ဖော်ပြထားသည်။
BTW၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အမေးအဖြေများ ထားရှိနိုင်ပါသည်။ 😉
မတ်လ 10, 2010 မှာ 10: 10 AM
ဒါ အရမ်းကောင်းတဲ့စာရင်းပဲ Pete။ ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူအများက အဆင့်တစ် (သင်အောင်မြင်ချင်သောအရာကို တွေးတောခြင်း) ကိုပင် မဖြေရှင်းဘဲ ကျန်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည် အဓိပ္ပါယ်မဲ့သွားပါသည်။ မက်ထရစ်များကို အသုံးပြုရန် တိကျရှင်းလင်းသော ပန်းတိုင်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များမရှိဘဲ၊ သင်သည် ပထမဦးစွာ ပစ်ခတ်ပြီး နောက်မှ မေးခွန်းများမေးနေခြင်းဖြစ်သည်။